အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: December 2007
မသေခင်လေ့လာရေးတခေါက်၊ ငရဲခန်းသို့ အရောက်လာပါ။
ဥပပဇ္ဖိဿန္တိ၊ တမလွန်၏ နောက်ကွယ်.
ဆင်းရဲ ညှဉ်းပန်း အပြစ်ပေးစခန်း
ဘုံ ၃၁ တွင် ကာမ ၁၁ ဘုံ ရှိ.၊
ငရဲ။ တိရိစ္ဆာန်။ ပြိတ္တာ။ အသူရကာယ်
ဆင်းရဲခြင်းအတိ၊ ပြီးသော အရပ်
ငရဲကြီး ရှစ်ထပ် ဟူသတတ်။
တဆင့် ဆီ အပေါ်ပထမကစ
သိဉ္ဇိုဝ်းငရဲ ၊ ကာလသုတ်ငရဲ၊
သင်္ဃာတငရဲ ၊ ရောရုဝ ငရဲ ၊
မဟာရောရုဝ ငရဲ၊ တာပန်ငရဲ ၊
အပြစ်ပြင်းစွ၊ မဟာအ၀ီစိ ငရဲ
နက်ရှိုင်းတဲ့ ငရဲတို့ ဘုံ။
ထို ငရဲတစ်ဘုံနှင့် တစ်ဘုံအခြား
အကွာယူဇနာ ခုနစ်ရာစီ ခြား
သံမြေနံရံ ကာရံလေးဖက် ၊
သံမြေခံအောက်ခံ၊ သံမြေ အမိုး
တိုးမထွက်သာ။ ထက်မြက် လက်နက်
ဓား။ လှံ။ ခက်ရင်း။ ရဲတင်း။
ပုဆိန်။ သံတံကျင်။ သန်လျက်။ သန၊
အသင် ပြေးထွက်လို့ မရ။
အ၀န်း ယူဇနာ ( ၉၀) ။ အစောက်ယူဇနာ (၃၀) ရှိသော
အ၀န်း ယူဇနာ(၃၀) ။ အစောက်ယူဇနာ (၁၀) ။
သံအိုးကင်းငယ် (၁၆) စီရံပတ်၊
မည်သို၏ပင် သတ်ဖြတ် ညဉ်းဆဲသော
ကံမကုန်သမျှ အဖန်ဖန် အသက်ရှည်ခံရသောငရဲ
"သိဉ္ဇိုဝ်း "ဆိုသော ငရဲ။
ချတိုင်း၍ သစ်ရွေသကဲ့သို့ လှီးဖြတ်
သံတောင်သံခဲကြီး၊ သံ တလိမ့် တုံးတို့ ဖြင့်
အဖန်ဖန် အလံလံ။ ဘယ်ပြန် ညာပြန်
လှိမ့်မွှေကြိတ်ချေ၊ ညှဉ်းဆဲခြင်းခံကြရ
'သင်္ဃာတ" ငရဲ သားဘ၀၊
ကျယ်လောင်အော်ဟစ်၊ မြည်ကြွေးသော အသံ
မီးတောက် မီးလျှံ၊ လောင်ကြွမ်း အဖန်ဖန်
သံခဲပူ ပေါ်မြှိုက်၊ လောင်မီးတိုက်ခံစေ။
" တာပနငရဲ "မည်ပေ၊
အလျှံ ရဲပြောင်၊ မီးသံတောင်
ခြေချ မောင်းတင်၊ လောင်ကျွမ်းစဉ်
လှံသွားမြမြ မြေ၌ချ။ ဦးခေါင်းပြောင်းပြန်
ပြင်းစွာဒုက္ခ၊ " မဟာတာပန" ၊
မီးလျှံ နှင့် ငရဲသား၊ အချိန်မလပ် ခံစား
ဆင်းရဲခြင်းအမျှု၊ ပြင်းပျ ဒုက္ခ
" မဟာအ၀ီစိ" တိုင်းဆမရှိ၊ ငရဲလားသူ။
သား ငါးတို့ ကျို သည့်အလား၊
"လောဟ ဂု မ္ဘီ" ( ကြေးနီအိုး၏ ငရဲသား) ။
အဆူးဦးဖျား ရှိ "လက်ပံ "ဆိုသည့် ငရဲ။
" အသိခန" ငရဲ ပင်လျှင်။
လောင်းချခံရ၊ " တမ္ဗောဒက" ငရဲက။
" အယောဂုဠ ငရဲ" မည်မှတ်။
" သေလပဗ္ဗတ" ဆိုသည့်ငရဲ။
ပူလောင်ကျွမ်းစေပြီ၊ ဤငရဲအမည် " ဘုသ နဒီ ”။
“ သီတ နဒီ ”။
ခွေးဘီလူးတို့ ၏ လိုက်လံကိုက်ခဲ
မပြေးနိုင်သော " ခွေးငရဲ"
“ ယန္တပါသာငရဲ” ဟူ၍သာ၊
ဤမျှ ကြမ်းတမ်း၊ ငရဲခန်းကို
မီးကျည်း တင်စေ။ လောင်မြိုက်ပေသော။
သံတောင် အကြား၊ပျက်ကျေ ခန္ဓာ၊
အရေခွာ ဆုတ်၊ ဦးခေါင်း ဖြတ်ခုတ်။
ဆင်းရဲ အလှောင်း၊ ငိုကြွေးရ သောင်းသောင်း၊
တိုင်းဆ မရ။ ပူ ဗျာပါဒ
စူးရှ ဒါးမြ လှီးဖြတ်ကျသည်။
ငရဲခန်းကို ထိတ်လန့် သမှု၊
ကုသိုလ်ယူ ၀န်ချ။ သင် မှားမိသမျှ။
သံဝေဂ ပွား၊ ကောင်းမှူအားချီ
ဇရာ ၊ မရဏ။ အနိစ္စသည်
လားမည် မသိ၊ သတိ ယှဉ်လိုက်၊
လုံ့ လ စိုက်လော့။
ရွှေပြည်နိဗ္ဗါန်။ ချမ်းသာမှန်သို့ 
အမှန်ကိုမြင်။ အမှားပြင်လော့ ။
နိုးထပါတော့။ မင်းရွှေကြော့။
မသဒ္ဓါ ( ၁၂။၃၀။၂၀၀၇)
မသဒ္ဓါ၏ ငရဲခန်းရှင်းလင်းချက် ကဗျာပါ. မှားယွင်းပါက ပြင်ပေးကြပါ။ တတ်သိသော ရဟန်း၊ သံဃာတော်များ အားဦးတင်ပါ၏ဘုရား၊
မှတ်ချက်။ မသဒ္ဓါ ငယ်ရွယ်စဉ်က မိဘဘိုးဘွားများက ငရဲခန်းကို ရှူမြင်စေရန် ၆ တပ်ကြီး၊ ကိုးထပ်ကြီး ဘုရား များသို့ မကြာခဏ အလည်ဖူးမျော်ရန်ခေါ် သွားဘူးခဲ့ပါသည်။ အလွန် ထိတ်လန် ကြောက်ရွံ့့၍ မ်ိမိကြီးလာပါက မိမိ၏ သားသမီးများကို ဤသို့ မချောက်လှန့်လို ဟူငယ်စဉ်က ထင်မြင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်ငြား.ယခုအချိန် တွင် ကွယ်လွန်သူ မိဘဘိုးဘွားများ ၏ စေတနာကို ကောင်းစွာ သိရှိ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတဦး ဖြစ်ခဲ့ရခြင်း ကို အ လွန် ဂုဏ်ယူ မိပါသည်။ မြန်မာပြည်နှင့်ထိုက်တန်သော ဤ မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်ကို မကွယ်မ ပျောက် နောင် နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင် တည်တန့် နိုင်ပါစေရန် မြန်မာနိုင်ငံသား မှန်သမျှ အရွယ်သုံးပါး မဟူပါဝင် ကူ ညီ ကုသိုလ် ပြုနိုင်ပါစေ ကြောင်း ပတ္တနာပြုဆုတောင်းလိုက်ရပါသည်.
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:51 AM 1 comments
"ယမမင်း ရဲ့ တံခါးခေါက်သံ။ စစ်ဆေးရန် ငရဲသို့ ကြွခဲ့ပါရန်"
အိမ်ရှေ့အရောက်..လာတံခါးခေါက်
ဆင့်ခေါ်လာတဲ့ ငရဲက တမာန်တော်..
ယမမင်းရဲ့ ရှေ့ ပြေး ဆက်သား။
အချိန်ကျနေပြီ ဦးXXရွှေ့။
လာ လာ လေ လိုက်ခဲ့ပေရော့။
ယမမင်းစံရာ ၊ အပါယ်ဘုံမြေသာ။
ခိုးရာပါ ဥစ္စာ နတ္တိ
ငွေတမတ်တောင် ကူးတို့ ခမပါရှိ်၊
ချစ်ရသည် ဆိုသော ခင်မ
မီးပုံထဲခုန်ချ၊ သင့်နှင့် မလိုက်နိုင်။
သူခိုးတာ ငါနဲ့ မဆိုင်တဲ့။
ပြစ်ဒဏ်ကျ..တမင်းရည်ပူလျှာနဲ့ လွှဲချ။
တခြားသမီးတွေနဲ့ အမွေလုပြီး စကားများ။
ဘင်ဘယ်ဘုံရောက်၊ သူတို့ မသိ။
အဖိုးသေ၊ မြေးတွေ ၀မ်းသာ၏။
မြေဆင်းသပိတ်။ သရဏဂုံတင်မဲ့ သူမရှိ။
မလှမပ သင့် ဈာပန၊ အသုဘကမ္မဌာန်းရှုသူမရှိ။
ရက်လည်ဆွမ်း၊ ပရိတ်ရွတ်ပေးမဲ့ သူမရှိ။
သင်သေလို့အောင်ပွဲခံ။
“ ခွေးဘီလူး အာဏာရှင်ရူးကြီးသေ။
အာဏာရဲ့ ရလာဘ်။ အဓမ္မရဲ့လုပ်ရပ်။
မင်းသေတော့ မင်းနားမှာ ဘယ်သူမရပ်။
မင်း အကုသိုလ်ရဲ့ ၊
ယမမင်း က အမိန့် တော်မှတ်ပြီ။
ငရဲ တိရစ္ဆာန် ပြိတ္တာ အသူရကာယ်
အပါယ် လေးဘုံ နေရာဝယ်။
ထိုက်ရာလားမဲ့ သူ့ ဘုံအရပ်
လိုက်ခဲ့တော့ ငရဲကြီး ရှစ်ထပ်။
ယမမင်း ဝေဖန် ပိုင်းရှူမယ်။
သံဃာကို နှိပ်စက်. သတ်ရဲတဲ့ အမျက်
ပျောက်ကုန်တာ သူ့ လက်ချက်
သူ့ သမီး ကိုယ်ပေါ် ၀င်းထိန်ထိန်။
သူမ ခြေကျင်း ဖြစ်သွားရ။
နှုတ်ပိတ် တိတ်ဆိတ် အဂတိတွေ။
မသိ မျက်ကွယ် ပြုထားတာတွေ။
လိမ်ညာမုသား၊ ပြည်သူကို စော်ကား။
ဂရုဏာမရှိ ၊ မုဒိတာ မသိ
ရှေ့ နေမလို။ အယူခံမလို။
သံဃာဂိုဏ်းခွဲ တဲ့ မင်းမိုက်
" အ၀ီစိငရဲ" သာ။ မင်းဆင်းပေတော့၊
ဒေ၀ဒတ် နဲ့ သာ တူတူ နေရော့၊
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 8:05 AM2comments
Labels: Joke, poem, Politics
နာကြင်ခဲ့ဝေဒနာ အပေါင်း။
သင်၏ လောဘ။ သင်၏မောဟ။
သင်၏အတ္တ။ သင်၏ ဥပေက္ခာ။
သင်သာ အမိန့် တော်မှတ်
၀ံပုလွေ၊ ခွေးအ၊ ဌက်ဠင်းတ နဲ့ 
မင်း အကြိုက်ပြော ခစား။
ငါရဲ့ အတ္တ တံခွန်ထိ။
လှုပ်ရှားတဲ့ ဣဿာ မစ္ဆရိယ။
မင်း ခံတွင်းရဲ့ ပုတ်လှီခြင်း
မင်း နာမ၏ ဆိုးသတင်း
မင်း လုပ်ရပ်၏ ကြမ်းကြုတ်ခြင်း။
သေဖော် ညှိချင်လို့ ။
ကြောက်ရွံ့ တဲ့ အဂတိ အမှောင်ချ
လိမ်မာသူ မှန်ရင်။ ပြောမှာဘဲ။
“အကျွန် နှာစေးနေပါတယ် အရှင်။”
မုသား အမှန်ဖြစ်နေတဲ့ တရား
နံစော် တဲ့ ခံတွင်း မွှေးစေရေး
မသဒ္ဓါ (၁၂။၂၉။ ၂၀၀၇)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 6:36 AM0comments
သတိထားပါ . ကျွဲ နှစ်ကောင်ခတ်နေသည်။
Media တိုက်ပွဲဟာ၊ စစ်တုရင်ပွဲအလား။
အမှန်နဲ့ အမှား၊ သေနင်္ဂ ဗျူဟာ
ထောင်ချောက်နဲ့ ၊ တည်ထား တဲ့အစာ
ပရိယာယ် နဲ့ ဆိပ်လူးမျှား
အမှန် ကွန့် မြူးတတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။
ဘုရင်သာ ကျ၊ ပွဲသိမ်း ရတာမို့ 
အရေးကြီးဆုံး၊ အကောင် မိဖို့ 
ပွန်းကလေး တလုံး၊ မြင်းကလေး တစ်ကောင်။
ဘိရှော့ တစ်လုံး။ ရထား တစ်စင်း။
မာယာ နဲ့ လှည့်ကွက်။
ဥာဏ် သာမသာ၊ ကစားချက်။
စိတ် မပျက်ရဘူး၊ အား မလျှော့ရဘူး။
စိတ်အေးအေး မှန်မှန်။ ခုခံတတ်ပါက
နောက်ဆုံး သူ့ ဘုရင်ကျ။
သတင်းမှားတွေ လာလာပို့ 
ကိုယ်လူ သူ့ ဖက်သား အသွင်သို့ ၊
အတွေ့ အကြုံ ရလာဒ်၏
ငါးကြင်းဆီ နဲ့ ငါးကြင်းကြော်လာတတ်။
မိတဲ့ ငါးနဲ့ငါးမျှားစာတတ်။
အပြစ်မရှိ ဖား။ အဆိပ်မရှိတဲ့ မြွေ။
ဘုမသိ ဘမသိ။ အစာဘဲ ရှိတာသိ။
ငါးမျှားချိတ်ကို၊ လာဟပ်သည့် အဖြစ်။
ဘယ်သူ့ အပြစ်လို့ ၊ ပြောဖို့ ကမဖြစ်။
ကဲ့ရဲ့ တင်းဆို၊ ဆဲဆိုစောင်းမြောင်း
ရွှေယုန်လေး လား၊ ကျားကြီိး လား၊
မိတ်ဆွေသစ်လား။ မိတ်ဆွေတု လား
လာအမှု မလုပ်ပါနဲ့ မိတ်ဆွေ။
ညီညာစေ သွေးသောက်တို့ သတိ။
ကြောက်ရွံ့ လို့နောက်တွန့်မည်မဟုတ်.
ခြောက်လှန့် လို့စိတ်ပျက်မည်မဟုတ်။
ရှုံ့ ချ လို့ ပွဲပျက်ရလိမ့်မယ်မဟုတ်။
တိုင်းပြည်အတွက်၊ ဒို့ တွေအလုပ်လုပ်။
စစ်ချီလမ်း ပေါ်၊ လာရှုပ်ခဲ့ ရင်
ဘယ်သူ မဆို ။ မတော်တဆ သေကျေ။
စစ်သည်ရဲ့နှလုံးသား၊ စာနာအား ရှိပေမဲ့
ရဲရင့်တဲ့ ခြေလှမ်းများ၊ ရှေ့ သို့ ဘဲ ဆက်သွား။
ဒါဟာ.. collateral damage ။
မရည်ရွယ်တဲ့ ထိခိုက်နစ်နာမှု တခု။
စေတနာကြောင့် သာ၊ လောင်လာ တဲ့မီး။
တိုက်ပွဲထက်စာ၊ ဘာမှ အရေးမကြီး။
ကျွဲ နှစ်ကောင်ခတ် နေတဲ့ကြား
ဟိုခုန်ဆွ ဒီခုန်ဆွ နဲ့ ဒီယုန်
ကျွဲမာန်ဟုန် ကို အလေးမထား
ဘယ်သူ့ ဘယ်သူမ၊ှ အပြစ်မှမရှိ။
သတိ မပြတ်. အကဲခတ်
မိဘုရားအတွက်၊ ပွန်းတစ်ကောင်ကိုဘဲ သတ်
ဒီမိုကရေစီ ပွဲတော၊့ ဒို့ မရပ်နိုင်
မသဒ္ဓါ (၁၂။ ၂၈။၂၀၀၇)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:32 AM 1 comments
မြတ်သောမင်းကြီးသို့သံဝေဂကဗျာတပုဒ်
ဘဘဟာ အကျွန်တို့ အဖေအရွယ်.
ထိပ်ဆုံးဥသျှောင် ရဲ့ နံပါတ် တစ်။
အာဏာ။ ပါဝါ။ ဂုဏ်ရှိန် မာန။
သိက္ခာ၊ မောဟ။ အောင်မြင်မှု ဟာ
လူသန်း (၅၂) သန်းအထက်။
တက် အုပ်ချုပ်တဲ့ မင်း
ဒေါသ အလျှဉ်းမဲ့၊ ကြင်နာခြင်းအတိ နဲ့ 
တရား မျှတ၊ ရင်ဝယ်သားတမျှ
ဆာလောင်သူ အတွက် အစာ
ငိုယိုသူ အတွက် ဖြေဆည်ရာ။
ခိုကိုးမဲ့ အတွက် အိမ်ယာ။
ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ ၊ ရှင်ကွဲသေကွဲတဲ့ ဝေဒနာ။
ပြည်သူများရဲ့ ကြောင့်ကျ သောက ဗျာပါဒါ။
ရင်၌ စူးနင်၊့ နားလည် စာနာ
နည်းနည်းလေးဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ခံစားပေးလှဲ့ ပါ။
သင်၏ အချိန် တစက္ကန့် ..
မအားမလပ် ။ အလုပ်နဲ့ မပြတ်
တပြည်လုံး ဘာဖြစ်နေတာ အကုန်မသိ။
ရိုးသား ဖြောင့်မတ်ပါ၏ လော။
တည်ကြည် ရဲရင့်ပါ၏ လော။
အမှန်မပြော။ ကပ်ဖါး ယပ်ဖား ပိုမို.
အချိုကိုသာ ရွှေနားတော်သွင်းနေပါ၏ လော။
မင်းနား တစ်ထောင်။ မင်းမြှောင် တစ်သိန်း
နီးရာ ဒါးကြောက်။ အမျက်ကြောင့်ပင်၊
အမှန်မဆို ။ လိမ်ညာဆိုသည်။
မင်းကြီး မြင် သိပါ၏ လော။
ပုဂံ လက်ထက်။ အနော်ရထာ့ ဒဏ်ချက်
ရွှေဖော့လုံးနဲ့ သာ၊ ရိုက်နှက် ခိုင်းသော်ငြား
သခင် အားရ၊ ကျွန်ပါးဝလျှက်
အာဏာသား ပါးကွက်။ ၀ါးရင်းဒုတ်နဲ့ နှက်
ရွှေဖျဉ်းညီနောင်တို့ ၊ အသက်ထွက်တယ်။
အမတ်ကြီး ဦးပုည။ နီးရာဒါး ကြောက်ရသမို့ 
မင်းကွန်း မြင်းခုန်တိုင်ပုန်ကန်ရေး။ အခါပေးခဲ့ရ၊
ဘုရင်က မသတ်လို။ ထိန်းချုပ် ထားတဲ့ကြား၊
မြို့ဝန် ဦးသာအိုးက၊ ဘုရင့် အမိန့် မရ။
ငါ့အမိန့် ကွ၊ ပေး ၊ အပြတ်ရှင်း၊
ဘုရင်ကဆို “လူကို ခွေးသတ်လေချင်း။”
စစ်ဘုရင်ကောင်း အာသောကသံဝေဂ တရားရ။ အချိန်မီ သိရတဲ့ အခါ
ပြန်လည် ပြုပြင်။ ကျော်ကြားခဲ့
ဘုရား ဒါယိကာ ရဲ့ ဘုရင်။
သင့် မှာ အချိန်မနှောင်း
ပြန်ပြောင်း ဝေဖန် အကဲခတ်။
အမှန်တရား ဟာ မည်သည့်အရာ။
လိမ်ညာမှုဆို သည် မည်သူ့ ဆီ မှလာ။
သင်ဘယ်လို ရှင်ဘုရင် ဖြစ်နေခဲ့ပြီထင်။
မင်း ကြီး ရဲ့ စေတနာနဲ့ မေတ္တာ။
သင့် ကို ပုန်ကန်တာ မဟုတ်။
သင့် ဂရုဏာလက် နဲ့ 
ကြမ်းတမ်းတဲ့ အာဏာစက်ကို ပယ်ဖျက်လှည့်ပါ။
မင်းယုတ်၊ မင်းဆိုး၊ မင်းညစ်
သင့် အမိန့် ကြောင့်၊ မဖြစ်ပါစေနှင့်။
အဖ မဲ့သား။ ခင်ပွန်းဆုံး မယား။ သားမဲ့ မိဘ။
သင့် လျှာမြမြ..အမိန့် တစကြောင့်
သင်သာ တယောက်၊ ကောင်းစားရောက်စေ
တစ်သောင်း ဗိုလ်ခြေ ။ ညက်ညက် သေကြေမဲ့အဖြစ်။
အသက်ချင်း ဖလှယ်ရမဲ၊့ ဘာသာရေးစစ်။
ရန်ကို ရန်ခြင်း၊ တုန့် ကာနှင်း
ရေလို မပြတ်။ ကြမ္မာ ၀ိပါတ်
သစ်ငုတ် မြင့်တုံ။ မြက် မြင့် တုံတည့်
ဒါးကို ဒါးခြင်း၊ တုန့် ပြန်ခြင်း။
ဆုံးသည် မရှိ။ အမုန်း ဖြစ်၏။
ဒါးကို ဘေးချ၊ ပုတီး "မ"လော့။
မေတ္တာရည်မိုး၊ ရန်မီး ညှိုးစေ။
မင်းကောင်းတို့ ၏၊ ဂုဏ်ကျက်သရေ။
အကျွန် တို့ အားလုံး ဤမြေတွင်နေကြပါသည်။
ဤ နိုင်ငံကို မင်းကြီး ချစ်မြတ်နိုးသလို ချစ်ကြပါသည်။
ဤ သာသာတရားဦးထိပ်တား၊ ရတနာသုံးပါးကဲ့သို့ ကြည်ညိုလေးစားပါသည်။
ဤ ငါးပါးသီလကျင့် ဝတ်တရား၊ ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့မြဲမြံကြပါသည်။
ရှေးဘုရင်များကဲ့သို့ ၊ သင်သိလိုလျှင်..
သင် တိတ်တဆိတ် ထောက်လှမ်း။
မင်း ခစားတဲ၊့ ကမ်းနားသစ်ပင်
ပြည်သုတွေ ထဲဝင်၊ သင်စောကျော
သင်၏ ဘ၀ဟာ ရေပွက်
သင့်တဦးရဲ့ နံမည် ၀င်။
ဖတ်မိသူများမှ တဆင့် နီးစပ်သူများ ဘဘ သို့ လက်ဆင့် ကမ်းပေးကြပါရန် မသဒ္ဓါ မှ လေးစားစွာ မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါသည်။ သာဓု သာဓု သာဓုပါ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:57 AM3comments
အပြစ်မဲ့ လို့ ၊ အပြစ်လိုက်ရှာ
တင်ရမဲ့ ပုဒ်မ၊ သက်သေခံပြ။
မရှိတဲ့သဲလွန်စ။ မရမက အမှုဆင်
ဘိန်းပစ်ပြီး ဖမ်းတယ် ခေါ်တယ်။
ပိုင်ရှင် နအဖ ရဲ့
ဆင်ဆာမတင်တဲ့ အပြာCD ပြား
ဘုန်းကြီးတုများဆို၊ ရှာအပြစ်ဖို့ ကို။
လူုများများနဲ့ စကားမပြောနဲ့ 
လွယ်အိပ်ကြီးကြီး မလွယ်ကြနဲ့ 
ဘယ်သူ ဘာအပြစ်ရှိရှိ။ မရှိရှိ
ဘုန်းကြီးနဲ့ကျောင်းသားများ၊
သေနတ်ကျည်ဆန် ။ ဒေါ်လာနဲ့ ဝယ်ရ.
တရားခံ၊ အမြင်သွက်လို့ သာ၊
ဆက်မလုပ်ရဲ၊ အကျင့် ယုတ်မဲမဲ
ဘူးလို ပေါ်ခဲ့ လဲ။
လက်ပူးနဲ့ လက်ကျပ် မမိ။
ဗမာပြည်က တရားမျှတ၊ ဥပဒေရှိရှိသမျှ
ပါးစပ်မှာတော့ အမြင်ကပ် ဥပဒေ
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 5:24 AM0comments
ကဲ..သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ဗျို့ ။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်မယ်။
ဘာညာ၊ လာလာမငြင်းနဲ ။
အပိုးမကျိုးတဲ့၊ ၂% ရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးတု၊
လမ်းမပေါ်စု ဆန္ဒပြ။ အသေးအဖွဲ ကိစ္စပါ။
အော်.. ဘယ်လိုသိလည်း.၂% ကိစ္စ ? တိကျပါရဲ့လား..?
အော်..၁% က ကျုပ်တို့ ဘုန်းဘုန်း၊
၉ရ% က ထောင်ထဲမှာ ခုတိ ဖမ်းထားတုန်း၊
၁၀၀ က နှုတ်ကြည့် ။
အားလုံးဟာ ၈၈၈၈ ကျောင်းသား။
တွေ့ မရှောင်၊ အချုပ်ထဲထည့်ထိမ်း။
လမ်းပေါ်မှာ၊ တင့်ကား ပြရမ်း။
ရန်သူ့ ဆွေမျိုးမှန်သမျှ၊ ပြန်ပေးဆွဲစမ်း။
မည်းမည်းမြင်။ အသေသာ ပစ်ကြစတမ်း
ဟော။ အခြေအနေ၊ အခု ပြန်လည်ငြိမ်းချမ်း။
အပြင်လူတွေ ၀င်စရာ၊ ပြည်သူ ပါစရာ
NLD ၀င်မလာစေရာ။ မလိုပေါင်ဗျာ
လူများလေလေ။ စကား ရှုပ်မှ ရှုပ်
ကျုပ်တို့ တွေဘဲ၊ တိတ်တိတ်လေး
နအဖ ကောင်းစားရေး၊ စစ်တပ်လွမ်းမိုးရေး
ဒါ ဒို့ အရေး ဒို့ အရေး.
ပြည်သူ့ အရေး၊ တပြားသားမပါ။
၃ခါတောင် တွေ့ ပြီးသား
အရေးပါတာလည်း၊ သူတို့ ပြောခွင့်မရှိ
အလာဘ သလာဘ။ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပြ
နအဖ ဟန်ဆောင်၊ စိတ်ကောင်း ပြနေတာ။
ကျုပ်တို့ လည်ပါတယ်..ဌဲ ဌဲ ဌဲ။
အထင်ရယ် မစမောကြပါနဲ့ 
ဗျာ.? တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဘယ်တော့လဲ?
ဟုတ်ကဲ့ ၊ ယတြာနဲ့ ရက်ကောင်း
လောလောဆည်၊ ရက်ရာဇာ မရှိသေး။
ရာဇပလ္လင်လှုပ်နေသေး လို့ 
တွေဖို့ လေ ဝေးဝေး ။ ခဏလေးစောင့်နေပါ။
လာမယ်..ကြာမယ်၊ နောက်ထပ်အနှစ် (၂၀) မှာ။
အခွင့်အလန်းပေါ်၊ ခန်းမထဲ အိပ်စက်ပွဲ။
ဒါ နအဖရဲ့ မူဝါဒ။
ကျုပ်တို့ ထင်ရာလုပ်ဖို့ ကအဓိကပါဆိုမှ။
ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များ။ ကျုပ်တို့ နဲ့ ပဏ္ဍာမစား
မ၀င်စေချင်လို့ ၊ ဘေးဖယ်ထား၊
ကျုပ်တို့ ရဲ့၊ ပေါကြောင်ကြောင်မူဝါဒများ
ဥပဒေဆွဲထားတာ၊ ကျုပ်တို့ စိတ်ကြိုက်။
တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ်၊ အချိန်ဆွဲခဲ့ပြန်
(၁၄) နှစ်ကြာခဲ့တဲ့၊ အမျိုးသားညီလာခံ
အစကပြန်ဆွဲရင်.နောက်ထပ် (၁၅) နှစ်၊
ဒါကြောင့်၊ သူများဝေဖန်လို့ မဖြစ်
အစကတည်းက၊ ကျုပ်တို့ မလျှော့
မပြောမရှိနဲ့ ။ ကြမ်းရဲတာ..နအဖ။
အနောက် အကူုအညီကို မလို။
အရှေ့ မှာ ကျုပ်အဖေ တရုပ်ကြီးရှိ။
ပြင်ပအဖွဲ့ အစည်း. ဘာကြီးမှမလို။
အတိုက်အခံတွေ၊ ရှိသမျှ သာဗြင်း
ဟင့်အင်း ကျုပ်တို့ မလို။
နိုင်ငံငယ်ပေမဲ့ ။ မမိုက်ရဲဘူးမထင်နဲ့ 
ဗိုက်ပူကား၊ လာဘ်စား ဗိုလ်ချူပ်များရှိတယ်။
ချောက်တီးချောက်ချက်၊ တရုပ်သေနတ်စုတ် များရှိတယ်။
ပျက်ကျမဲ့ သက်တမ်းကုန်၊ လေယာဉ်စုတ်တွေရှိတယ်။
နိုင်ငံခြားထွက်ပြေးဖို့ stand by ထား၊
အမိန့် ပေး၊ ငယ်တဲ့ စစ်သားတွေကတိုက်မယ်။
ဒေါ်လာပေး၊ ကြံ့ဖွတ်တွေက ရိုက်မယ်။
ကျုပ်တို့ ဘဲ၊ အမြတ်ထုတ်။
ယာက လည်းညက်၊ . ကြက်လည်း မောစေ။
လူနာကမျက်ဖြူဆိုက်။ ဒါဆို နအဖ အကြိုက်။
တသက်လုံးဆင်းမယ် မထင်လိုက်နဲ့ ။
ကျုပ်တို့ တော့ ဆက်ဆက် မိုက်နေမှာ။
မသဒ္ဓါ (၁၂။၂၅။ ၂၀၀၇).
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 10:09 PM0comments
ဘဘနဲ့ နှင့် အင်တာဗျုးခြင်း၊
ဖြစ်နိုင်ရင်..နောက်အနှစ် (၂၀) ကြာကြာ
ဦးနေ၀င်းတောင် (၉၀) ကျော်နေသေးတာ
အခုမှ ကျုပ်အသက် (ရ၀) ကျော်ကျော်လေး
ကျုပ် ကဘုန်းကံကြီး၊ ဘုရားအလောင်းတော်ကြီး
ကျုပ်စစ်သားက (၅) သိန်း။
ဟော ..မနက်ဖြန်ဆို ကျုပ်တပ်သားဘဲ။
ကျုပ်ကိုထောက်ခံမှာ၊ ရုရှနဲ့အိန္ဒိယ။ တရုပ်။
ကျုပ်မလှုပ် မပြုတ်။ မဟုတ်တရုပ်လုပ်
နအဖရှင်ဘုရင်လုပ်တာ နှစ် (၂၀)ပြည့်၊
တကြိမ်ရွေးမှ (၄) နှစ်ခံတာ။
ကျုပ်ဆို နောက်အနှစ် (၂၀)တောင်မဖယ်။
ဘယ်သူပြောပြော ငါ့သဘောနဲ့ ငါ။
လျှောက် ရင်လေးမနေပါနဲ့ ဗျာ
ငထွားရယ်၊ လာခါးနာမနေစမ်းပါနဲ့ ။
မိုးရေကြီးတာ ကျုပ်ကြောင့်လို့ ရယ်။
မင်းကောင်းလို့မိ်ုးမှန်သည့်။
မိုးသဲ ရပ်မရနိုင်အောင်၊ တကယ်တရားရှိ။
ကျုပ်လေ။ ဘုရားဖြစ်မဲ့ အုတ်နီခဲ။
သံဃာတော်ကို၊ ဒုတ်ရိုက် သန့် စင်ရဲတာ။
ဘယ်သူလာမရှုပ်နဲ့ ။ ဇက်ပြုတ်သွားမယ်။
အမိန့် တော် မှတ်တယ်။
လမ်းမပေါ် ပရိတ်မရွတ်နဲ ။
လမ်းလျှောက်ခါ ဆန္ဒမပြနဲ့ 
ကျောင်းတိုက်ထဲ တခြားစာမသင်နဲ့ 
အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ ၊ ဆုတောင်းပေးဖို့ မလို။
မနက်ဖက် ဆွမ်းခံကြဖို့ မလို။
စစ်သား အကြောင်း၊ ကောင်းကောင်းပြလိုက်မကို
ခေါင်းခေါက်လဲ တောင်းပန်မယ်မထင်နဲ့ 
ငရဲတောင် သွားမိုက်မဲ့ တစ္ဆေ
အင်တာဗျုးခွင့်ပေးပြီး.ယုတ်မာသမျှ အိပ်သွန်ဖာမှောက် မချွင်းမချန် ပြောကြားပေး သော ဦိးXX ရွှေအား မသဒ္ဓါမှ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 11:10 AM0comments
(၂၀၀ရ) ဗမာပြည်က ဘာသာရေးစစ်။
ဘုန်းကြီးအတု နဲ့အစစ်ပြဿနာ။
နအဖ ရဲ့ ရွှေဥာဏ်တော်ကြီးမားစွာ။
"ခြင်းကပ်မှ.. မင်းဆက်မပြတ်" တဘောင်အညီ
ဒါ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာလွဲသုံးစားမှုဖြစ်သည်။
မင်း က လူသတ်အစိုးရ
ကမ္ဘာ့ ကိုယ်စားပြု သံတမာန်။
မွန်ဂိုသံသတ်လို့ ၊ပျက်ပြုန်းခဲ့ ပုဂံနမူနာ
ဗမာပြည် စစ်မှန်စွာ၊ ဒီမိုကရေစီရရေး
ကမ္ဘာ့အရေး။ အမေရ်ိကန်ရဲ့အရေး
ပြည်သူနဲ့ ထိုက်တဲ့၊ လွတ်လပ်ခွင့်ကို
မှန်ကန်ဘက်မှာ ကျုပ်တို့ ရပ်
သန်း ( ၅၂ )သော ဗမာပြည်သား
ကြီးလာတော့ ဘုန်းကြီးသတ် လူယုတ်များ။
ကျုပ်လိုလူ လာမပြိုင်နဲ့ 
ကျုပ်က George W. Bush ၊
ဖါးတု ခရုခုန်၊ ဒီအိုင်ပျက်ရုံပေါ့။
ကျုပ် လက်ပျက်ပါ့ မောင်ရာ
မသဒ္ဓါ (၁၂။ ၂၃။၂၀၀၇)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:06 AM0comments
အမှောင်လွှမ်းသောခေတ်။ ဒို့ ချစ်တဲ့အမိမြေ။
လက်ခံ၊ ဝေငှ ဖြန့်ချီနိုင်ခွင့်။
အပိုဒ် ၁၉ မှာ ဖွင့် ဆိုထားခဲ့သော်ငြား၊
လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့် 
တစဆီ ဆွဲဖြဲခံရတဲ့ လွတ်လပ်မှုနှင့်။
ပို့ ပေးမယ် အင်းစိန်ထောင်ထဲကို။
ငါပြောတာလုပ်။ ငါလုပ် သလိုမလုပ်ရ။
သင်ပုန်းကြီး ကျုပ်တို့ ခေါင်းထဲရှိတယ်။
ဌက်ပျောသီးအခွံနွှာတာကမှ၊ ခက်ဦးမယ်။
မုန့် လုံးကြီး စက္ကူကပ်။
လူ့ အခွင့်အရေးရဲ့ လုပ်ဇာတ်။
လျှာနှုတ်ဆိုတာ ပြောဆို ဝေဖန်အမှန်ပြင်မှု။
အမှောင်လွှမ်းတဲ့ သမိ်ုင်းတခေတ်။
အမှန်ညစ်ထေးခဲ့၊ ဒို့ ချစ်တဲ့ ပြည်မြန်မာ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 8:54 PM0comments
ပြားပြား မှောက်ခဲ့ ။ ရာစုဝက်နီးနီး၊
နာကြင် ခန္ဓာ ခံစားကျိတ်မှိတ်။
ဘယ်မလဲ။ လူ့ ဘ၀ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ။
ကွေးသောလက် မဆန့် ခင်
မနည်း မနော၊ တိတ်တဆိတ် လွင့်မျှော
သွေးနဲ့ ခေတ်သမိုင်းကို ပြောနေ။
ဒို့ လို မခံစားစေချင်လျှင်။
တစ်ယောက် တစ်လက်၊ နှမ်းတစ်လုံး
တစ်ဦး တစ်မှုန်၊ သဲတစ်ပွင့်
အုတ်တံတိုင်းတွေ၊ ပိုခိုင် မြင့်စေ။
ညီညွတ် စွမ်းအား၊ စိတ်တန်ခိုးများ
မိမိ အသိ။ မိမိသတိ။
ပြည်သူနဲ့ တွဲ၊ အထွေထွေသပိတ်ပွဲနွဲ။
ကိုယ်ဖို့ ကြုံလျှင်၊ သက်လုံကောင်းစေရစမြဲ။
ပါဝင် တော်လှန်ကြဖို့ ၊ တာဝန်ရှိသည်။
မသဒ္ဓါ (၁၂။ ၂၂။၂၀၀၇)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 6:10 AM0comments
Labels: Cheer, poem, Politics
ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်း၏ ဂုဏ်ကျက်သရေ။
ပန်းသင်းရနံ့ ၊ လေညှင်းလေဖန့် ဖန့် ကဆောင်ယူ
ကောင်းသတင်းဆိုတာ၊ ဖုံးထားဖို့ မလွယ်ကူ
ဗမာဂုဏ်၊ အမျိုးကောင်းသမီးများအတွက် စံနမူ။
ညံ့ချက်ရယ် များ၊ တကဲ့ သူမတူ
မှုန်ညစ် ရှုံတွ။ မိုက်လုံး ကြွနေသူ
သေခါနီး ရိက္ခာယူ။ သိက္ခာဆိုး ကမ္ဘာကျော်သူ
နတ်ပြည်နဲ့ ၊ အလှမ်းကွာဝေးတဲ့သု
ဘုန်းကြီး သတ်ပြီး။ အပယ်စရံသပ်သူ
တာတာ့။ ဘယ်သူမှ ၀မ်းမနည်းချင်။
နံသာဆီ နဲ့အီး
ဘုန်းကြီးနဲ့ ဘီး ပါဘဲ။
ဂုဏ်သိက္ခာ ဆိုသောအရာ၊ ငွေပေးဝယ်မရ။
လူလေးစားမှုဆိုတာ။ လာဘ်ထိုး မရ။
ဆိုးရင် ဆိုးခြင်း၊ ဆိုး အတင်းဇော်၊
ဒီကမ္ဘာထဲက၊ တနေ့ နေ့ မင်းပျောက်တောင်
တံရော် ကင်ပွန်းနဲ ၊့ ဆေးကြောမစင်။
နွားနို့ ရေ ကြည်နဲ့ ဆေး။ အမင်္ဂလာ မပျောက်ချင်။
ကဲ... ဆိုးခြင်း ကောင်းခြင်း၊
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:25 AM0comments
ဆက်လျှောက် သူငယ်ချင်း။ ဇွဲသာတင်းလော့၊
ဒို့ တတွေမွေးလာ၊ စစ်ကျွန်သဘောက်ကာလအတွင်း။
လက်နက်ပါ၊ သွေးဆာနေခဲ့ မြင်ကွင်း၊
ဒို့ တတွေလျှောက်နေ၊ စမ်းတ၀ါး အမှောင်တွင်း။
ခွေယိုင်လဲပြို၊ ပြန်ထ ဇွဲမာန်တင်း
ထွေးပွေ့ ကူညီ၊ ဘ၀တူအချင်းချင်း။
လမ်းဆုံးသာ ဆက်လျှောက်စေ၊ တွေ့ ရမယ်
လုံ့ လရင်းခဲ့ မောင်ငယ်
ဒုက္ခတွေ ဆိုးလှစေ၊ ကူညီစာနာရိုင်းပင်း
ဂရုဏာ၊ မေတ္တာ၊ စစ်မှန်ရင် အောင်မြင်နိုင်ခြင်း
လူသားအတူ၊ ကြည်ဖြူ ချစ်သူငယ်ချင်း။
လမ်းကြမ်းပေါ် လွှဲမှားချော်လဲ
ဒါ အသေး အဖွဲ ၊
ဖုန်ခါချ ဆက်သာသွား၊ အချိန်တွေဖင့်သွားမယ်။
မျှော်လင့်ချက်ကြီးသူ ။ အပိုအချိန်မအား.
သွားသာ သွား။ ပန်းတိုင်သို့ မရပ်မနား
မင်းဟာ နေရောင်ခြည်ခူးမဲ့ မဟာလူသား။
လစ်ချိန် မှာမရိုးမသား။ ခြေထိုးမှုများ သာဖြစ်တယ်။
မင်းဘာတွေ လုပ်နေ။ မင်းဘဲသိ
မင်းစေတနာ၏ စွမ်းအင်။ မင်းရဲ့ ဂုဏ်အင်။
ငါ အခုနေရာ ရပြီဟ။
ငါမှ ငါကွ ပြောသူများ။
အများ သူငါက သိ။
မသဒ္ဓါ ( ၁၂။ ၂၁။ ၂၀၀၇) မောင်လေး မင်းကိုနိုင်နှင့် အေးလွင်အတွက်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:23 AM0comments
စစ်ကျွန်အဖြစ် ဒို့ နွံနစ်မခံ။
ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်နဲ့ ။
ဘယ်တော့မှ မတုန်လှုပ်နဲ့ ။
ဘယ်တော့မှ လက်မမြှောက်နဲ့ ။
ဘယ်တော့မှ ဒူးမထောက်နဲ့ ။
ဘယ်တော့မှ လက်မလျှော့နဲ့ ။
ဘယ်တော့မှ အားမပျော့နဲ့ ။
ကြောက်ဟန်သာပြ၊ ပိုပိုပြီး ချောက်
ပြည်သူ့့စိတ်ဓါတ်များ၊ မိုးထိ မြင့်မား။
အောင်ပွဲဟာ၊ ဒို့ လက်တကမ်း။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်..နေ့ သစ်ရဲ့ ပန်းများ၊
တနေ့ တလံ၊ မရွေ့ တဲ့ပုဂံ
ဒီမိုကရေစီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 10:38 PM0comments
အယူတိမ်းတဲ့ နတ်စိမ်း၊ မျက်ရည်ကျရမဲ့ လွမ်းဇာတ်သိမ်း။
တကမ္ဘာလုံးမှာ တာဝန်ရှိ။
မွေးရာပါ အခွင့်အရေးတွေ ရှိ၊
လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီ၊ နေထိုင်နိုင်ခွင့် 
ကမ္ဘာက၊ လက်မခံနိုင်တဲ့ တခဏ
ကျူပ်တို့ နဲ့ ဆိုင်ဘူး။
ကုလ ၀င်မပါနဲ့ အလကား
ဗမာ စတိုင်နဲ့ ဗမာ၊
(၇) ချက် လမ်းညွန်မြေပုံကြီးရှိတယ်။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လူမပါရင်တောင်
မြေပါရင်ပြီးမဲ့ ၊ ဗမာပြည်ရဲ့ မြေပုံ
သူ့ ဆီမှာ လူစွမ်းအားအစုံ၊
မဆုံးနိူင်။ တထောင့်တစ်ညရဲ့ ပုံ။
ဆင်သေကို ဖုံးတဲ့၊ ဆိတ်သားရေပါးဘဲ.
ကမ္ဘာကမသိ၊ အော်... ရှိနိုင်ပါသလား။
မင်းတို့ သာ.. ခပ်တုံးတုံးများ၊
အရှက်နည်းပါး။ နှစ်ခွနဲ့ မြွေလျှာဖျား။
မင်းဆိုးမင်းညစ်၊ သမိုင်း တွင်ရစ်
၁၀၁ ပါးမင်းအမိန့် က..၀ရဇိန်လိုရှခဲ့ပြီ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 9:48 PM0comments
Labels: Joke, photo, poem
သင့်မောဟ ကို ပြင်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 6:06 PM0comments
ဆူးကြားထဲက ဘူးသီး၊ စည်းကမ်းကလနားလည်း ကြီးမှကြီး။
နအဖ ပြည်သူသို့ သတိပေးချက်။
အင်တာနက်ဆက်။ အွန်လိုင်းတက်၊ နိုင်ငံရေးစာ မဖတ်ရ။
ဟိုတယ်ခရီးသွား၊ ကြေငြာ ဓါတ်ပုံ၊ နိုင်ငံခြားမပို့ ရ။
တယ်လီဖုံး အဆက်သွယ်။ နိုင်ငံခြားနဲ့ မပြောရ။
လမ်းမပေါ် စာရွက်ကမ်း။ လက်မလှမ်းရ၊
ကျောင်းသားများ ကျောင်းတက်၊ အနက်မ၀တ်ရ။
ကိုယ်မေဂျာကလွဲ၊ တခြားအခန်းထဲ လူုပျိုမလှည့်ရ၊
ကျောင်းသားလူငယ် ညဘက်လည်။ တွေ့ ရင်မသင်္ကာမှု။
ကျောင်းမှ အုပ်စု၊ စကားပြောမှု၊ (၅) ဦးထက် မကျော်ရ။
ကဗျာဆရာများမွေးနေ့ ပွဲ၊ ကဗျာမရွတ်ရ။
ဘုန်းကြီးကျောင်းသော့ချိတ်၊ တံခါးပိတ် ဆွမ်းကြွမထွက်ရ။
ဘုန်းကြီးရှင်အို သေစေလို။ တကာ မလှူရ။
ဆေးလာကုသူ သံဃာလူ၊ ဆေးစာ ယူလာမှ၊
၀ါလကျွတ်တောင်။ ၀ါဆက်ဆောင်၊ ကျောင်းပြင်မထွက်ရ။
မယ်သီလတောင်။ လွဲမရှောင်။ လူ့ ဘောင်ထွက်ခိုိင်းကြ။
အရှေ့ မုခ်က၊ ကြားတောရ။ မြေသိမ်းနအဖ၊
ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲ။ စစ်တပ်စွဲ၊ အပြင်လူမ၀င်ရ။
သာသနာ့မြေပေါ် စီးနင်းနေ ။ စစ်တပ် ဘွတ်ဖိနပ်။
အလှုခံပုံး ဖေါက်ကာဘုံး၊ သူတို့ အရက်ဖိုးသုံး။
နီးရာဒါး ကိုကြောက်နေရ၊ သံဃာ့ နာယက။
ပရိယတ္တိသံဃာ့ တက္ကသိုလ်။ ဘုန်းကြီးပျို မတက်ရ။
ဆွမ်းလောင်းပွဲဆို ပါမစ်လို။ ကျောင်းသား မပါရ။
ဘုန်းကြီးစစ်လည်း။ လူလည်ထဲ ပရိတ်မရွတ်ရ။
ဘုရားဖူးသူ၊ မှတ်ပုံတင်ယူ၊ မပါသူ မတက်ရ။
မှန်ရာရေးရင်၊ တိုင်းပြည်နှင်၊ ကုလ၀န်ထမ်းဘ၀။
အမေရိကန်စင်တာ မေဒေးပွဲ၊ တက်သူ တရားစွဲ၊
ဆန္ဒပြပွဲ ဗီဒီယိုလည်း၊ ကြည့်ခွင့်မရှိစေရ၊
တရားပွဲခွေ ပိတ်ဆို့ နေ။ ရောင်းရင် ဖမ်းထောင်ချ။
အဆိုတော်တွေ သီချင်းဆို။ အကျီ င်္မချွတ်ရ။
လူပျက် ပျက်တာ နိုင်ငံရေးမပါ။ ပါရင် ထောင်ခုနှစ်နှစ်။
ပျက်လုံးမတော် ပျက်ချင်သော်၊ အလုပ်ပြုတ်ပြီမှတ်။
အိမ်သားပြင်ပ၊ ဘယ်ဧည်သည်မှ အိမ်လည်မလာရ။
နိုင်ငံခြားသတင်း နားထောင်ခြင်း။ အလျှဉ်းမလုပ်ရ။
အိမ်ရှင်မများဈေးဝယ်သွား၊ ကုန်ဈေးနှုန်း မငြီးရ။
ဆက်ကြေးကောက်နေ၊ ကြံ့ဖွတ်တွေ၊ မပေးရင်ဈေးမရောင်းရ။
သင်တန်းတွေပေး ဘလော့ရေး၊ မီဒီယာစစ်ဆင်ရေး။
အနေကြာရေး၊ ယတြာပေး နေကြာဘဲ စိုက်ပါ့။
ဗိုက်ကြီးသည်များ ကုသိုလ်ထား၊ ရေချမ်းမလှူရ၊
AIDS ရောဂါသည်တွေ။ တော်ရာသွား သေကြ။
၈၈၈၈ကျောင်းသား ထောင်မအား၊ ကြိုးကျတိုက်ထဲသွား၊
ခေါင်းကွဲသေသူ လလယ်ဆွမ်း၊ သွားမစားစေရ။
အဖေသေလည်း၊ အသုဘပွဲ။ ချစ်သမီးမသွားရ။
သန်းခေါင်သန်းလွဲ တံခါးမဖွင့်လည်း။ တရားစွဲမည်မှတ်၊
အာဇာနည်နေ့ဒို့ မမေ့၊ ဟစ်ကြွေးမအော်ရ။
ပန်းခွေချမှု ခွင့်မပြု ၊ သ၀န်တို သူတို့ က။
အောင်ဆန်းကဗျာ ရေးသူအား။ ဖမ်းဆီးအပြစ်ကျ။
အောင်ဆန်းအကြောင်း၊ ရာဇ၀င်ဟောင်း ပြန်ပြောင်းမပြောရ။
NLD ပါတီဝင်သွားလေရာ၊ အပြစ်မလွတ်ရ။
ငါးလွှတ်တာလည်း အပြစ်ဘဲ၊ ဆုလည်း မတောင်းရ၊
ပင်နီအကျီ င်္။ ယောထမီ..၀တ်ရင်မကြည်ကြ။
ကားခ မလောက် လမ်းဆင်းလျှောက်၊ ကြံ့ဖွတ်များ အားပြ။
ထောက်ခံပွဲ မတက်၊ ရာထူး မတက်၊ ကြံ့ဖွတ်ထဲ ၀င်ကြ။
နေပြည်တော်မပြောင်းချင်သူ၊ ၀န်ထမ်းလူ အလုပ်ထွက်မရ။
ပြောင်းပါသော်လည်း။ ဘန်ကာထဲ အလုပ်လုပ်တတ်မှ။
ဆရာမတွေ ပုဝါစုံချ၊ ထောက်ခံပွဲ မတက်မနေရ။
လာဘ်မပေးသူ ဒို့ ရန်သူ၊ များများလေးပါမှ။
ငွေကြာရံက ငွေဖလား၊ မင်းလှဈေးရောက်သွား။
ဘုရားစိန်ဖူးတွေ ချပြင်နေ။ စိန်ယူ..ပုလင်းကွဲတတ်။
ပြည်သူ့ အလှု သူ ကုသိုလ်ယူ၊ ခေါင်းပုံဖြတ် ဒီစစ်တပ်။
ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေထဲ၊ ဒီစစ်တပ်ဘဲ၊ သူဘဲခေါင်းဆောင်တတ်။
ချွေးနည်းစာငွေ၊ တိုက်ယူနေ။ စစ်တပ် အေးဒါးမြ။
ဒို့ များပြည်သူ၊ ညီညွတ်အတူ
ပြည်တွင်း ပြည်ပ။ စည်းရုံးကြ။
မသဒ္ဓါ (၁၂။ ၁၉။၂၀၀၇)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 10:05 PM0comments
သူမို့ ပြောတတ်ပလေ။ အကြည်အညိုပျက်စေတယ်တဲ့လား၊
ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) .
အစိုးရကို အကြည်အညိုပျက်စေတဲ့ ပုဒ်မ။
နံမည် တတ်လည်း တတ်ရဲကြ။
အော်...ပေါမှ ပေါရက် ပလေ။
ပြည်သူ လိုလားသည့် အစိုးရမျိုး
ပန်းသတင်း က လေညှင်းဆောင်
ပြည်သူ နဲ့ တသားထည်း
ရင်နှစ်သား ပမာလို၊ အများကြည်ညို ချစ်နှစ်လို။
နွံ့ ၌ ဘယ်မညစ် ၊ ပတ္တမြားသာ မှန်ရင်ဖြင့်။
လာဘ်လာဘ ယူ။ မှန်သူ ရှုံးနိမ့်
မြေနိုမ့် လှံစိုက်။ ဘက်လိုက်တတ်သော
ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်။ မတရားလုပ်သော။
နာယကဂုဏ်၊ မြူတမှုန်မျှ မရှိ။
၀ မရှိ ၀ိလုပ်နေသူများ..
ပြည်သူ့ မေတ္တာနဲ့ ထိုက်တန်ပါလား။
တောင်နဲ့ တန်းကျ။ ၅၀၅ (ခ) နဲ့ပြပြပြီး
မင်းမှာမှ ကြည်ညိုနိုင်သော ဂုဏ်မရှိ။
မင်းမှာမှ ယုံကြည်နိုင်သော ဒြဗ်မရှိ။
အလကားဖြစ်နေရ တဲ့ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 7:59 AM0comments
အသင်.ဘယ်မှာလဲ? .နိုးထလှဲ့ တော၊့ မင်းကြီးရန်နောင်။
သူ့ ကျွန်သဘောက်၊ ဘ၀အောက်မှ၊
ဘုန်းကြီးသတ်လို့ ကမ္ဘာကျော်
အဆင့် အဆင့်၊ လက်သရမ်း၊
အလီဘာဘာနဲ့ ခိုးသား၄၀ ဇာတ်လမ်း၊
ဒို့ ဘုန်းကြီးမျိုး၊ မကြာခင်ကန်းတော့မယ်။
မရှိကြတော့ဘူး လား ?
မကြောက်မရွံ့ ၊အသက်စွန့် နွယ်ဘွား။
သတ္တိနဲ့ စစ်အာဇာနည် ယောက်ျား။
ပြည်သူ များအတွက်။ သာသနာတော်အတွက်။
တယောက်ဘဲရှိရှိ၊ ရဲရင့် သောအာဇာနည်.
ဒါက အချက်။ မင်း အကွက်ဘဲ။
မင်းသာစွန့် ရဲ..မင်းဟာ သူရဲကောင်းဘဲ။
ကျည်ဆန်တစ်တောင့် ။ ဗုံးတစ်ပေါက်။
မင်းရာဇ၀င်၊ နှစ်တသောင်းတိုင် တွင်၊
သတ္တိဘဲ လိုမယ်။ ဗျတ္တိဘဲ လိုတယ်။
သေတနေ့ ။ မွေးတနေ့ 
စွန့် လွှတ်ရဲ ရမယ်။
သေရင်မြေကြီး။ ရှင်ရွှေထီး
မင်းမှာ လူသူ ရှိ။
မင်းသာ သာသနာ့အတွက်၊ အမာခံဦးသျှောင်၊
ဘယ်သူ လူစွမ်းကောင်းပါလည်း ?
ဗိုက်ခွဲ အူဆွဲ၊ မိုက်ရူးရဲသူ မလို။
လက်သည်းကြားထဲ၊ အပ်စိုက်မဲ့ လူသာလို၊
မြန်ပြည် ဂုဏ်ဝင့် ။
မျိုးနွယ်ဂုဏ် တင့်စေမဲ့ စစ်သူရဲကောင်း။
ယိမ်းနွဲ့ ပါးဒါး တစ်ချောင်း နဲ့ 
ခေတ်သမိုင်း ရဲ့ စာမျက်နှာ…
မသဒ္ဓါ ( ၁၂။၁၅။၂၀၀၇)
သတ္တိရှင် မင်းကြီးရန်နောင်များသို့ 
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:01 AM0comments
ပူဇော်ထိုက်ပါပေသည်၊ သံဃာ၏ ဂုဏ်ရည်။
ပြည်ကျိုးကောင်းမှု၊ သက်စွန့် ပြုသည်။
ကျောက်စိုင်လားသို့ ၊ ရာသက်ပန်။
တနေ့ မပြတ်။ သတိရအပ်။
ရေထိပန်းသို့လန်းကြစေ။
နတ်ရွာလမ်းသို့မြန်းကြစေ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:25 AM0comments
သား လွမ်းပေမဲ့လည်း ဖေဖေ (ဦးထင်ကျော်သို့ သားထံမှ ပေးစာ)
သား နဲ့ မေမေရဲ့ အားထားရာ
သား ရဲ့ လက်ဦးဆရာ။
ပြသခဲ့တာ၊ ယောက်ျားကောင်းရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ။
ဆာလောင် ငိုကြွေး၊ အစာငတ်မွတ် ခလေး
ရင်အမျှ ကြေကွဲ၊ ကျွေးစရာမဲ့ မိဘတွေ၊
ကျမျက်ရည် ခြောက်ခမ်း။ အေးမြ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့ 
ကုန်ဈေးနှုန်း၊ ကျဆင်းရေးသို့ ။
စပါးတောင် လိုမောက်။ ဆီကို ရေလိုချိုးသောက်
ဆေးရိုး မီးတောက်လှုံ။ ပြည်စုံ ကြွယ်ဝ
ဘေးမခတဲ့ ပြည်မြန်မာ ။
အခုမှ ကျက်သရေ၊ ဂုဏ်ကင်း
ကမ္ဘာ့အောက်ဆုံး၊ ဆင်းရဲနိုင်ငံစာရင်း။
ထွက်ကုန် စီးဆင်းကြ။ တရုပ်ပြည်မဆီ.
စားလို့ ရတာ အကုန်ရောင်း။
ဈေးထဲက ဈေးဗန်းတွေ၊ တဖြေးဖြေးကျုံသေး။
ဘယ်ဈေးသာ မေးရုံလေး။ မ၀ယ်နိုင်သေး။
စစ်အစိုးရ သာ။ အစိုးရ ဧည့်ခံပွဲ။
တဖြဲ နှစ်ဖြဲ။ အသားကုန်သာ ဟဲ။
ပြည်သူ စားနိုင်တာ၊ ပဲရည် ကြဲကြဲ။
မှန်တာပြောလေ၊ စပါးမွှွေး မျက်စိစူး။
တရားပျက် ဖမ်းဆီး။ နှောင်ကြိုး တဲပြီး၊
ဖေဖေ့ ကိုပို့ ၊ အင်းစိန်ထောင် သို့ ။
လူယုတ်မာ များ၊ တရား မတည်။
ခိုင်ကြည် နှလုံး။ ဘယ်တော့ မယိုင်၊
ရဲရင့် စိတ်ထား၊ ခန့် ညား ကျောက်စိုင်၊
သတ္တိ၊ ဇွဲ မာန်။ မြဲမြတ် ခိုင်ခိုင်
မှားသူ နိုမ့်ပါး။ အမှန်သာ နောက်ဆုံးတရားနိုင်။
စားဝတ် ဖူလုံ။ ကျန်းမာ ပြည်စုံ။
ကျန်းမာ ပြည်စုံ။ ပျော်ရွှင် ကုံလုံ
ပျော်ရွှင် ကုံလုံ ။ လုပ်အား မာန်စုံ
လုပ်အား မာန်စုံ၊ ပြည် လုံခြုံ၏။
ဒါ တွေကို..စစ်အစိုးရ မသိကြဘူးလား။
ဒါ ကို..စစ်အစိုးရ မတွေးဘူးလား။
ပြည်သူ့ ပျော်ရွှင်၊ ကျန်းမာရေး
ဒါ ကို..စစ်အစိုးရ အသားမပေးဘူးလား။
ပြည်သူ့ တိုးတက်မှ၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်
တိုင်းပြည်တိုးတက်မှ ၊ နိုင်ငံဂုဏ်တက်တယ်။
သားနဲ့ မေမေတို့လက်ခံ။
မိသားစုစွန့် ၊ ပြည်သူကို ချစ်ဝံ့သောအဖေ
ဗမာမှာ မွေး၊ ဇာနည် သွေး၊
ဖေဖေ့ ရဲသွေး၊ နီစွေးစွေး
စတေးမှု များ၊ ကဗျည်း ရေးစေ။
လေးစား ဂုဏ်ယူ၊ အဖေတူသား
အောင်ပွဲများသို့ ၊ ဆက်တိုက် သွားမယ်။
မျိုးဆက်ဟောင်း မှ မျိုးဆက်သစ်။
ခေတ် သမိုင်း အဆင့်ဆင့်၊ ဂုဏ်မြင့်ထယ်။
သေရင်တောင်။ ဘယ်တော့ အားမငယ်။
ကိုတင်ကျော်၏ မိသားစုနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ မသဒ္ဓါတို့ ကိုထင်ကျော်အတွက်ဂုဏ်ယူလျှက်ရှိပါသည်။ ကိုတင်ကျော်၏ ရဲစွမ်းသတ္တိ အား ထပ်တူထပ်မျှ အမွေရသူ သားငယ်လေး..သတ္တမတန်းကျောင်းသားလေး မောင်ဖုန်းလှိုင်ဦးအားဤကဗျာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါကြောင်း။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 9:14 AM0comments
ကျမ အိမ်က ထွက်ခွါခဲ့တယ်။
မိုးလ ကြယ်မြင် တဲ။
ရွာတွေ မီးရှို့ ဖျက်။
ကျမ အသက် (၁၄) ၊
ရွှေရင်သိမ်းသစ်၊ ဖူးပွင့်စပန်း။
စစ်ဆင်ရေး လာမဲ့ စစ်သား
ပန်းစားဘီလူး ကြောင့် မနွမ်းစေချင်။
ထင်းခွေ ရေခတ်၊ အပြင်ထွက် လျှင်။
အလုပ်ပွဲစားက တဖွဖွ၊ လာလာ စကားစ
သူပြောတဲ့ နိုင်ငံခြား။ နိဗ္ဗါန် အလားတဲ့။
မစားရ ၀ကမန်း၊ ကျမ ခေါင်းမရမ်းနိုင်၊
ကျမ၀င်ငွေသာ ရှိ၊ မိသားစုကို ပြန်ကြည့်၊
မိဘကို ကြည့်ရှု ပြုစု။
အထုတ်ကလေး ဆွဲလို့့လိုက်ခဲ့ပြီ။
နယ်ခြား ရဲ့ တဖက်ဆီ။
ကျမအတွက် တော့ ငရဲခန်း.
လိမ်လည် ရောင်းချခံထိရ ကျမ.
လစာလည်း မရ၊ အခန်းကျဉ်း ထဲပိတ်.
တနေ့ တနေ့ ယောက်ျား၊
ဆင်းရဲနိုင်ငံသူ သွားရာ၊ မိ်ုးလိုိက်ရွာသည်။
ကာမ ၀ယ်ယူ စားသုံးသူများအတွက်
ရာဂရဲ့ နွံ့ ညစ်
AIDS ရဲ့ သားကောင်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 9:25 PM0comments
အညတြရဲ့စစ်သည်ငယ် ၏ မျှော်လင့်မှု။
နှင်းမှုန် ဖွဖွ။ ဖြူ လွလွသည်
ကောင်းကင် ဆီက၊ေ၀၀ဲ့ကျနေ။
ရှစ်ခွင်ကြည့်တိုင်း။ အုံ့ မှိုင်းမှောင်မဲ
နှင်းမုန်တိုင်းစ။ မော်စကိုရဲ့ ဆောင်းတည။
အသဲ ခိုက်ထိ။ ချမ်း၏ မရွှင်။
အမေ့ အိမ်လွမ်း။ ချစ်သူ့ ကိုနမ်းချင်။
မောင် အဝေးမှာ ပညာသင်။
အများအမြင်။ ငွေကရွှင်။
ကျနော် လည်း၊ လူငယ်တစ်ဦးပါ။
ချစ်တတ်၊ ခင်တတ်။ ကြင်နာတတ်။
အသည်းနှလုံးလည်း၊ ခင်ဗျားတို့ လိုပါဘဲဗျာ။
မိဘကို ငါတကော ကောကြည့်၊
လေဟုန် ပျံချင်သည့် လူငယ်။
ကောင်မလေးတွေ ကျရင်၊ သဘောခွေ့ ရ
ကျနော့ မှာ ရာထူး။
တနေ့ နေ့ တော့ တပ်မှုးတော့၊ အနည်းဆုံးဖြစ်မှာ။
တသွေး၊ တသံတမိန့် ၊
ကြောက်ရွံ့ တုန်၊ ဖိန့် ဖိန့် 
အထက်ပေးတဲ့ အမိန့် က မတရား။
လုပ်က လည်း မလုပ်ချင်။
(၃) နှစ်သားလို ၊ ကျနော်လေခေါင်းခါငြင်း၊
မချိသွားဖြဲ။ ပြုံးရတဲ့ ဒုက္ခ။
ကျနော်.ရင်မနာဘူး၊ မထင်ကြပါနဲ့ ။
အသည်း နှလုံး ဖြူတဲ့သူ ။
ပန်းမွေ့ ယာနဲ့ ၊ ရွှေကော်ဇော။
စိန်ရွှေလင်းလက် သော။
ကောင်းစားကြ။ ဖြုန်းကြ သုံးကြ။
ကျနော်နေရာ ရမလား၊ မရလား တောင်မသေချာ။
ဆန်ကာတင်၊ ဟိုး အထက်ဖက်မှာ။
မတူညီဘ၀ ။ စိတ်ဆင်းရဲရပေမဲ့။
ပေါက်ကွဲဗုံး ခန္ဓာ မှာချီ ။
မကြိုက် လည်းပြုံး၊ ကြိုက် လည်းပြုံး။
မလုပ်ချင်လည်း..ဟုတ်။ လုပ်ချင်လည်း ..ဟုတ်။
ကျနော် ရုပ်သေး ဗိုလ်ရုပ်ပါ။
ကျနော်မသိရတဲ့၊ လှို့ ဝှက်ချက်နဲ့ ဗမာပြည်။
ကျနော်မမြင်ဘူးတဲ့၊ အမှောင်ထဲက ဗမာပြည်။
ကျနော်မသင်ဘူးတဲ၊့ ဒီမိုကရေစီဆို သောအရာသည်။
ကျနော်မြေးမြစ်များ..ခံစား၊ စံစား စေချင်သည်။.
သို့ ပါသော်ငြား ကျနော်စစ်သား။
ဒီလူများ က၊ ယုံကြည်မည် မဟုတ်။
ဒီက၊ စစ်သား အချင်းချင်း၊ ကျနော့ယုံကြည်ခြင်း။
ထုတ်ဖေါ်ရှင်းလို့ ပြောရမည် မဟုတ်။
တိတ်တဆိတ် သူတို့ CBOX တွေ ထည်း။
တမ်းတမိ ဆန္ဒလေး တွေ ရေးခဲ့တယ်။
ကျနော် ခံစားချက်တွေ ခြွေ။
ကျနော် မျက်ရည်တွေ ဝေ။
မကြာခင်။ လွတ်လပ်ပါစေ အမိမြန်မာပြည်။
အမှန်သိသော ခလေးများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ စိတ်သာ ပဓါနပါ၊ သားတို့ လည်း နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်နေတာ။ တခြားနိုင်ငံတွေ တိုးတက်နေတာ မြင်ပါသည်၊ ဒို့ တွေတိုက်နေ တာ စစ်တပ် ကိုမဟုတ်၊ လူနည်းစု လက်တဆုတ်စာ အာဏာရှင်နှင့် စံနစ်ဆိုးကိုဖြစ်သည်။ ဒီလူတွေ ပြုတ်ကျလျှင်.သားတို့လည်းတနေ့နေ့ စစ်တပ်ရဲ့ သမာသမတ် အရာရှိကောင်းကြီး တွေဖြစ်လာမည် ယုံကြည်ပါသည်။ please! Hang in There!
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:49 AM0comments
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်ပြင် ဆီက
မိုးတောင်ညို့ညို့ ၊ မှိုင်းပျို့့ပျို့ ရီ။
ရှစ်ခွင် မိုးလုံး။ အုံ့ ဆိုင်း ဝေစီ။
မိုးလ ရာသီ။ မြန်မာပြည်။
မြညို ကျွန်းအုပ်။ စိမ်းအုံ့ ဝေသီ
နိုင်ငံခြားပို့ ။ ၀င်ငွေစို့ တော့
တောင်ကတုံး သို့ ဖြစ်တော့သည်။
သစ်တော ပြုန်းပျက်။ ရာသီ စက်သည်
ပြောင်းလဲ နှိပ်စက် ပြန်တော့သည်။
မိုးကျ သော်လည်း။ ရွာမစဲ
မိုးရေ စီးကျ၊ မြေပြင်ကလည်း.
ဖုန်းကွယ် မရှိ၊ တိုက်စား၏။
မြစ်ကြောင်း သောင်တင်၊ ကျဉ်းခဲ့လျှင်။
ရေလျှံ ရေမြုပ်။ ရွာလုံးပြုတ်
စည်းစိမ် အိမ်ယာ။ မျောလျှက်ပါ
အသက် များစွာ ဆုံးရ၏။
တောင်သူ ၊ ငတ်ဆင်းရဲလေတော့၏။
ကြိုးစား ကာကွယ်ကြဖို့ ရှိ။
ဝေဖန်ရေး၊ ဒီရေ ဘာကြောင့်လျှံသနည်း။
သစ်တော ပြုန်းတီး၊ မိုက်လုံးကြီး၊
ဒါ တရားခံ၊ ဘယ်သူနည်း။
ကျွန်းသစ် ခိုးထုတ်။ တောလုံးပြုတ်
ဒါ ဘယ်သူက၊ လုပ်သလည်း.
တရားခံ သိလျှက် အပြောခက်။ နီးရာ ဒါးက ထက်နေ၏။
သူခိုးသိ လျှက် ၊ အဖြေခက်။ ဘုရင် သံလျှက် ခိုးလေ၏၊
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:31 PM0comments
သူ့အဖေ ကတပ်ကြပ်။
တသက်လုံးလုပ်ခဲ့သမျှ ၊ သုံးရစ်မှာရပ်။
မောင်ငယ်ငယ်ကတပ်ထဲ၊ နှပ်ချေး တွဲလွဲ
သူငယ်ချင်းများနဲ့ ၊ စစ်တိုက်တမ်းကစား
သူ့ ၂၀ ကျော် အရွယ်ဦး
ရွှင်ပျော်မြူးမိ။ မာနမိုးထိအောင်။
ပုံစံကေ ဘဲမြီးတောင်။ ခါချမရ..
စွံ့ လှချည့်၊ ဂျိုကြွ ထောင်ထောင်။
ဗိုလ်အသစ်ချပ်ချွတ် ကလေး တစ်ဦး။
ကျွန်မ က.ဘွဲ့ တခုရ။
ဆန္ဒပြ ကျောင်းပိတ်ခံရ ပညာရပ်။
ကျောင်းမသင်၊ သက်မွေးအတတ် ။
နဖါး ကြိုးတတ်၊ လင်စံရွေး
မိခဲ့ ပါ့ ၊ ကွိကနဲ လေ။
တနေ့ မှာယောက်ျားက၊ ဘုရင်ရာထူးရ
ဗိုလ်မှုးကတော်မမ တွေနဲ့ လဲတည့် မှ။
ဒါမှ အမှတ်တွေ တိုးတိုးရ။
မမ.. မမ လို့ မညုတတ်သူများ။
အဖေ အမေက ဘာကောင်လည်း။
ခပ်တော်တော် အတွေးအမြင်ရှိ။ အာဂ ရှိမဲ့လူ..
ဒီလူကို ပင်စင်ပေး ။ တပ်ထဲ မနေရေး။
ခပ်တုံးတုံး ခပ်ဖျင်းဖျင်း၊ ခေါင်းခါ တခါမှမညင်းသူ
ရော့ အင့် ရာထူးယူ၊ နိုင်ငံခြားသွား၊
အိမ်ပြန်ရင် သမီးနဲ့ ပေးစား။
ဘယ်နေရာမှ ဆန့် မ၀င်။
သူတို့ အိမ်ဖော် နားကပ်လောက်ပင်။
မောင် လည်းလေ စိတ်ဓါတ်ကျ၊
ခလေး ၃ ယောက်နဲ့ဗိုလ်လခ၊ ကြားပေါက်ကမရ။
ဗိုလ်ကတော်ရာထူးနဲ့ဈေးထွက်ရောင်း။
တပတ် မှ ၃ရက်၊ ကျမ ဈေးဘဲထွက်နိုင်။
တပ်မှုးကတော်မမက၊ ကျမဆို ကျမမှ သဘောကျ။
အိမ်အခေါ်လွှတ်တဖွဖွ၊ မအားဘူးငြင်းလည်းမရ။
လက်ဖက်သုတ်စား၊ ဆံပင်ဖြူ နှုတ်၊
ခလေးတွေ အိမ်မှာနေကြ။ ရှိတာ ရှာစားကြ။
အခစား မ၀င်သမျှ ၊ နင့် အဖေရာထူးကမရဘူး၊
တည့်အောင်ပေါင်းမှ။ မောင်ရှေ့ တန်းမသွားရမှာ။
တပ်က အ၀တ်အစားဝယ်ပေး၊ ပုဝါ စုံချ
စိတ်ကူးထဲ တနေ့ နေ့ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်လို
အခုတော့ အထင်နဲ့ အမြင်လွဲ။
မောင့် ရာထူး တန်းစီထား။ နံပါတ် ၀မ်းရောက်ဖို့ 
ဗေဒင်မေး ။ စာချ. ဘယ်ဟာမှ မရတဲ့ခဏ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:45 AM 1 comments
Labels: Joke, poem, Politics, Truth
လော်ရာဘုရှ် ၏ သတိပေးချက်။
အမေ့ခံနေ၊ သူမဆင်းဘူးတဲ့ 
ပင်စင်မဲ့ ဒီ စစ်တပ်။
အင်း။...ဒင်းတို့ သေတော့မှဘဲ ကိစ္စပြီးမယ်။
ဒီလောက် စီးကြောတဲ့ ဗမာစစ်အုပ်စု။
မမာတာ..သူ့စရိတ်နဲ့သူမကု၊
စင်္ကာပူလာ၊ ရင်တုဖင်တု ဘု တွေထည့်ကြ။
ဘဘကြီးများဗိုက်ပူပူ၊ စက်နဲ့ ကူ အဆီစုတ်ကြ။
သေတော့လည်း၊ တိုင်းပြည်စရိတ်နဲ့ မသာချ။
ဒီတိုင်းပြည်တခွင်က၊ ပြည်သူမှ မငတ်။
အလှပြင်အပြင်ထွက်မရ နှစ် ၂၀။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားမပြောရ။
သနားစရာ့။ ဒီနိုင်ငံ ဘယ်လိုမိန်းမဘ၀။
ဘာတွေ ဒီလောက်၊ ရှင်ကြောက်ရသတုန်း။.
လက်နက်ဆို ဘာမှ မရှိရ။
သူက ဗမာမ မို့ သာ၊ ရှင် ဗိုလ်ကျသမျှသူခံ
ကျမတို့့ဆီ သေနတ်တွေ ပေါမှပေါ။
Taxes က Cowgirl လော်ရာ ကျမ၊
မိုက်ရင် သေနတ်ချင်း ယှဉ်ပစ်မလား။
ရှင်တခါထည်း ဦီးဏှောက်ပွင့် ပွဲပြီးသွားမယ်။
ကဲ ကဲ ဘိ်ုးတော်..ကျုပ်ပြောနေတယ်။
ဘေးဖယ် ဘေးဖယ်၊ ရှင့် လူသတ် စစ်တပ်။
ရှင့်လူတွေ ငတ်ပြတ်။ ထိုင်းနယ်စပ်မှာ။
ဗမာများ ကမ္ဘာပေါ်အနှံ့ ၊ ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ
ရှင်မို့နေနိုင်ပလေ။ တယောက်ထဲ၊
နေစမ်းပါဦး ။ နေမဲ့ လူမရှိဘဲ။
ရှင်တယောက်ထဲ ဗ်ိုလ်စွဲနေတဲ့ နိုင်ငံ။
ရှင့်အသက်ဖက်နဲ့ ထုပ်ဖို့ သာပြင်။
မသဒ္ဓါ (၁၂။ ၁၂။၂၀၀၇)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 11:52 AM0comments
ဆုပေး နဲ့ ဒဏ်ပေး။ မင်းကြိုက်ရာရွေး
ဆုပေး နဲ့ ဒဏ်ပေး
ယနေ့ တိုင်အမြစ်တွယ်တဲ့ စံနစ်။
ကောင်းတာ လုပ်ရင်၊ ကောင်းနံမည်ထွက်။
ထိုပုဂ္ဂိုလ် နောက်သို့ ၊
နှစ်ရှည်လစား။ အမှားနဲ့ အမှန်။
အဖြူနဲ့ အမည်း။ သဲသဲကွဲကွဲ။
ဖွတ်ထွက်ခါမှ၊ သိရ..ဒါ တောင်ပို့ ပါဘဲ။
မြန်မာ့စစ်အစိုးရ..လက်ဖျားခါရ ကမ္ဘာက
“ ၀ လူမှ အမှန်” ။
ဖားတယ်လေ။ သူဆီက gas ဈေးချိုချိုဝယ်ရန်။
“ ကျုပ်လူဘဲ ကောင်းတယ်"
ပျက်ခါနီးမို ၊့ ဈေးလျှော့ရောင်းမယ်။
UN က ချင့်ချိန်တွေး၊
အင်း၊ ချော့ရေးတော့၊ တယ်မလွယ်။
မုန့် ကြွေးလို့ မရမဲ၊့ ဗမာစစ်အစိုးရ။
လာ လာ ကျောမကော့ မပြနဲ့ ။
မုသားပိုပို..အညုအနွဲ့ တွေနဲ့ ၊
မယားငယ်ချွဲ၊ လာလာ မချွဲမနေနဲ့ ၊
ဒီ အချိုးတွေ၊ ရိုးလှပါရဲ့။
ဟော..နောက်ထပ်ရမယ်။.ဒီ တစ်ချက်လေး အပို။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:01 PM0comments
ထောင်နေသော "ဒိုမီနို" ပြားကလေးများ။
ဒို့ တတွေ ပြည်သူထဲကမွေး
စံနစ်တကျ နဲ့ နှိမ်နင်းခဲ့
သမဂ္ဂ ဗုံးကွဲ။ မှိုင်းရာပြည့်ပွဲနဲ့ ဦိးသန့် 
၈၈၈၈ နဲ့၁၉၉၆။ ၁၉၉၉.
ဘုန်းကြီး တွေက အစ၊ သွေးမြေကျနီနီ။
တော်လှန်ကြဖို့ ၊့ အချိန်တန်ပြီ။
နောက်ကလူတွေ၊ လှော်တက်မထောင်ပါနဲ့ ဦး။
ရှုံးခဲ့ဘူးတဲ့အသိ။ သူတို့ မှာတိုက်ကွက်ရှိတယ်။
မှားခဲ့ဘူးတဲ့ရလာဒ်၊ ပရိယာယ်တွေ တတ်တယ်။
ရန်သူတွေ သဘောကျ၊ လက်ခုတ်တီးကြ။
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး။
မယားက မကြည်ဖြူ။ အိမ်က ဆင်းမတဲ့ ဟဲ့။
ကွန်ပြူတာ ရှေ့ သတင်းယူ။
ဘော့စ့် ရဲ့၊ မုန်းမျက်စောင်း၊
အလုပ်ပြုတ်လို့ ၊ ဗိုက်ဟောင်းလောင်း၊
သူတို့ နိုင်ငံကို ချစ်တာယုံတယ်။
မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့အာမခံတယ်။
သူတို့ လည်း ချီတက်ခဲ့တာဘဲ။
စားချင်လို့ ဒီလူတွေ၊ ထွင်နေတာမဟုတ်ဘူး။
ဒို့ တွေမှာ လက်နက်။ အပ်တိုတလက်တောင်မရှိ။
စစ်တိုက်ဖို့ အရေး၊ စိတ်အတွေးဘဲရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒို့့တွေမာန်မလျှော့ ၊
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်တိုက်ဖို့ တော့၊
မျိုးချစ်နာမ၊ ဒို့ အားလုံးရဲ့ဘ၀
ထိပ်ဆုံးကအပြား၊ လဲမသွားစေနဲ့ ၊
ခေါင်းဆောင်ကို ပံ့ပိုး ။
အားကိုးစောင့်ရှောက်၊ သူ မလဲတဲ့အထိတိုင်။
ဒါမှသာရောက်မဲ့ ။ တော်လှန်ရေးပန်းတိုင်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:13 PM0comments
မြက်ကြမ်းရှည် ဖုံးလွှမ်း၊
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 8:42 AM0comments
“ပျော်ရွှင်မွေးနေ့့တို့့..သက်ဆုံးတိုင်”
သူ..(သို့ မဟုတ်) အရိပ်ကောင်းသော သစ်တစ်ပင်။
သူ ..(သို့ မဟုတ်) တုနှိုင်းမဲ့ ဂရုဏာမြစ်တစ်စင်း။
သူ ..(သို့ မဟုတ်) ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်။
ကယ်ဆယ်လိုသူ။ ကျမ်းမာပျော်ရွှင်စေလိုသူ၊
အမိမဲ့ သား၊ ရေနည်းတဲ့ များ၊
ငိုကြွေးမှု ကို. ဖြေဖြောက်စေ။
အရေးကြီးတဲ့လာဘ်တပါး၊
(၄၈) ပြည့်မြောက် ဤမွေးနေ့ မှသည်။
အနှစ်တစ်ရာ တိုင်စေဖို့ 
မမစင်သီယာမောင်၏ (၄၈) ပြည့်မြောက် မင်္ဂလာအတွက်
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:14 AM0comments
မီဒီယာ တိုက်ပွဲ ဆိုတာ..ဘာတဲ့လည်း
မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တိုက်မယ်လို့ 
ဘယ်သူ ဘလော့၊ လူအလာများ?
ဘယ်ဘလော့ဂါ ဒို့ ရန်သူပင်။
Email ထဲက တဆင့်
Virus လွှင့် ပြီသာမှတ်။
ပို့ နေကျ၊ သတင်းထောက်ကို လှည့်စား။
မှန်ပြီဟဲ့လို့ ဖေါ်ပြမှ၊ .အမှားလာထောက်ပြ။
ဆိုမယ်လေ။ မိုးလုံးပြည့် မုသာဝါဒတဲ့ ၊
အော်..တရားကျစရာ။ ကိုအ၀ှါ ရယ်။
သတင်း မှားမှန် ၏ လှို့ ဝှက်ချက်များ။
အမှန် တစ်ရာထဲက အမှားတစ်ခု။
ကိုယ့်ရေ ကိုယ်ဝယ်သောက်။ အော်ဆန္ဒပြလိုက်၊
ကိုယ့်ကားကိုယ်မောင်း၊ ခရီးရှည် ဆန္ဒပြလိုက်၊
တတ်အားသမျှ မာန်ဇွဲမချ၊ ကြိုးပမ်းနေကြ။
မင်းမလုပ်ချင်နေ၊ လာမနှောက်ယှက်နဲ့ ၊
ဓါတ်ပုံအမှားသတင်း။ လှည့်လည်စာပို့ ခြင်း၊
မြန်မာတွေအချင်းချင်း။ နအဖ စနက်မကင်း။
အချိုသပ် အလံရှူး၊ သူတော်စင်လုပ်ပြခြင်း၊
ဖွတ်ထွက်တဲ့အချိန်ကြ။ ဒို့့တတွေ နောက်ကျ
နန္ဒာလှိုင့် ရဲ့ အတင်း
ကြိုးစား အားထုတ်ရမဲ့ အနိုင်။
တနိုင်ငံလုံးရဲ့ ၊ လွတ်မြောက်ရေးပန်းတိုင်။
တွေးတွေး ငိုင်မနေနဲ့ ။
မမှားသောရှေ့ နေ။ မသေတဲ့ ဆေးသမား
ဒါ အဆန်မရှိတဲ့ လူတွေအလုပ်။
မျှတ နားလည်မှု ရှိရမယ်။
စာနာ အားပေးမှု ရှိရမယ်။
သမ္ဘာတွေလုပ် နေတဲ့ မီဒီယာတိုက်ပွဲ
လာ ဆရာမလုပ်နဲ့ သူငယ်ချင်း။
မင်း ဖုံးထားတဲ့ ပုတ်သင်ဥ၊ မပေ့ါတပေါ်ဖွေးဥဥ။
မသဒ္ဓါ ( ၁၂။၁၀။၂၀၀ရ)
( မီဒီယာတိုက်ပွဲ နှင့် မြန်မာဘလော့ဂ်များ ဘာလဲ ဘယ်လဲ)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 5:28 PM0comments
နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု တဲ့လား။ ဟာ ဟာ့၊ ရီရတယ်။ ဗြဲ
နအဖ အစိုးရဆိုသော သူ
သူတို့ လည်း၊ အမှန်တော့
နှုတ်ခမ်းတလန်၊ ပန်းတလန်နဲ့ ဆဲရေး၊
သူက လွဲခဲ့ရင်၊ သူပုန်တဲ့ ဆိုသေး။
အနူလက်နဲ့ ၊ ဒင်းတို့ မို့့ရွှေခွက်ကိုင်။
ဗမာပြည်။ ကမ္ဘာ့အောက်ဆုံးတန်းမှာ ဖင်ချထိုင်။
ဒင်းတို့ မို့ မျက်နှာပြောင်.ခေါင်းမာနိုင်ကြ။
ထမင်း ပိုပို ငတ်။
ကဲ ဒီ ဇာတ်လမ်း..
နိုင်တဲ့ သူ တိုင်ဦးစတမ်း။
မင်းယုတ် ကိုမကြိုိက်လို့ ဖီဆန်။
မင်း အမိန့် အာဏာစက်ကိုအာခံ။
စံနစ်ဆိုး အမြစ်ပြုတ် တော်လှန်။
သူပုန်နဲ့ ၊ အုပ်ချုပ်သူ နိုင်ဖို့ အလားအလာ။
ရာခိုင်နှုန်း ၅၀၊ ၅၀ စီပါဘဲ။
မကြောက်ရဲရဲ..အလံလုပွဲ ဆက်နွဲကြစို့ ။
မသေမချင်း သွေးနဲ့ ရင်း
ဒို့ တမျိုးသားလုံး လွတ်မြောက်ရေးသို့ ၊
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:24 PM0comments
သေခါနီးတောင် အချိန် မစီး၊
ကဲ ပြောပါ. ဘယ်အရာမင်း သိက္ခာ။
သင့်ကို ဘာဒုက္ခပေးနိုင်ပါလိမ့် ။
မင်းမိန့် နဲ့ သိမ်းတဲ့ ၀တ္တကမြေ..
မြေပြင် ခြေချစဉ် ပထ၀ီမြေကွဲ
ကျွံ့ ဝင် စေမည့် ၀သုန်မြေပြို
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:25 AM0comments
တင့်ထူးဝေဆာ။ ပန်းဗေဒါ သို့ 
လှခေါင်မဉ္ဇူ။ စံတူ မနှိုင်း
ဒီ ထချင် ထ။
ချောင်း၊ မြောင်း အနှံ့ ။
ဘုံရိပ် ဆာယာ။ ခရမ်းပြာ ၀င့်။
သင် ဘဲ..မြန်မာပေ တကား။
မဗေဒါလော၊ ကိုဗေဒါလော မသိသော်ငြား..အမှတ်တရ ကဗျာရေးပေးလိုက်ပါသည်။
အားမာန်အပြည့် နှင့် ရောက်ရာ ကျရာ.ပေါက်ရောက် ရှင်သန်နိုင်ပါစေ။ မသဒ္ဓါ လုပ်နိုင်ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် အားလုံး လည်းလုပ်နိုင်ကြမှာပါ.။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စေချင်ပါသည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:00 AM0comments
ညစာချက်နေတဲ့၊ အမေ့နား ပါးအပ်။
သား စွန်လွှတ်ချင်၊ တအောင့်သာပါ။"
စာမလာ သတင်းမရ။ စုတ်စမြုတ်စ
ကျိုးကြောင်းမသိ၊ မျက်ရည် အတိ
ပူပင်မိရ။ အမေ အိပ်မရပြီ။
ဘာမှမသိတဲ့၊ လူမမည် ခလေး
ပြန်လာနိုးနိုး။ မျှော်ကိုး ရင်မှာ။
မြင်ရရေးရေး။ မျှော်လင့် တွေးတွေး။
ခွေးဟောင်ချိန်၊ ည အိပ်ရေးပျက်။
ခပ်တိုးတိုးနဲ့ သူ့ အသံ
ဖြေဆည်ရာမဲ့ ၊ သောကနဲ့ မိခင်။
စာပို့ လုလင် ဝေတဲ့ စာ။
စစ်ဝတ်စုံနဲ့ နို့ နံ့ မစင်တဲ့ ကျမရဲ့သား
ကျမသားလေး ရှေ့ တန်းမှာကျဆုံး
ခုနှစ်သောင်း ရှိတာက ခလေးစစ်သား ။
လူမုန်းများလို့ တပ်ထဲဝင်သူ မရှိ။
တွေ့ သည့် ခလေးများကို ပြန်ပေးဆွဲ၊
ပေမပီ ပိန်လှီ သေးကျုံ ၊
သံပတ်ပေးခံရ လက်လှုပ်တတ်ရုံ စစ်သားရုပ်ဘ၀၊
စစ် ချွေးတပ် စခန်း။
ပြန်လမ်း မသိ။ အပျော် နတ္ထိ
နအဖ ၏ ခလေးစစ်သား။
လူဖြစ်ရ ဘာအဓိပ္ပါယ် ရှိပါ့မလဲကွယ်။
သားကလေး မောင်ကျော်မင်းသူ ကို ခလေးစစ်သားဘ၀မှ..အချစ်ကြီးမားစွာဖြင့် စွမ်းစွမ်းတမံ ကယ်ယူသော အာဇာနည်မိဘ ဦးသောင်းအေး၊ ဒေါ်အေးနိုင် တို့ အား ချီးကျူးဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်၊ မိဘမေတ္တာ ဟူသည်..အဆုံးအစမရှိပါ၊
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:21 PM0comments
ရှင်သန်ခြင်း၏ သစ်တပင်။ အမိမြေသို့ အလှဆင်။
ဗုဒ္ဓရောင်ဝါ၊ ထင်လင်းတဲ့ မြန်မာ ၊
မဂ္ဂင် ရှစ်ပါး၊ ပွါးများရာ မြန်မာ ၊
ဗြဟ္မာဇိုရ်တရား၊ ထွန်းကားတဲ့ မြန်မာ၊
ခန္ဓီစ တရား၊ လက်ကိုင်ထားခဲ့ မြန်မာ၊
ငါးပါးသီလ၊ ခါးဝတ်ပုဆိုးမက မြဲတဲ့ မြန်မာ၊
မေတ္တာ အကြင်နာ စေတနာ တရား
မွေးရပ်၊ အမိမြေ မြန်မာ။
လူ့ အခွင့်အရေး၊ ဆိတ်သုန်းသုည။
တူညီစွာပါဝင်နွဲ။ သပိတ်ပွဲသို့ ဝင်။
ဒို့ စိုက်ဖို့ လို၊ ဒီသရက်ပင်အသစ်
စိမ်းရွက်ဝေလွင်။ ပုရစ်ဖူးစေဖို့ 
တယောက်တလက်၊ စုစည်းစို့ လား။
အသုံးချကြစို ၊့ ဒို့ ညီညွတ်အား။
လင်းလက်မဲ့ ၊ အနာဂတ်များသို့ ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 8:37 AM0comments
နအဖ၏ စေတနာ။ နားလည်ပေးပါ။
နားလှည့်လို့ပါးရိုက်
လွှတ်လိုက်ပြီ အကျဉ်းသား ရှစ်ထောင်။
လူလိမ်လူုကောက် ၊ ဆိုးသွမ်းရမ်းကားသူများ။
သနားညှာတာ၊ အနော်တို့ လွှတ်
ဒို့ အရေးအော်ရင်တော့၊ တသက်မလွတ်။
ထိုင်းအကျဉ်းသားများ၊ လွှတ်ပေးထား။
တကဲ့ကို ရှားရှားပါးပါး လွှတ်ပေးသွား၊
အယောက် (၂၀) ကြီးများ တောင်။
မလွှတ်က ကျုပ်တို့ မိုက်မဲရာပါ့။
လွှတ် သူ ရာနှုန်းတွက်ရင် ( ၀.၂၃ % )
အယောက်တစ်ထောင်မှာမှ (၂ )ယောက်နှုန်း
အလုပ်လက်မဲ့မှာ၊ ကျုပ်တို့ မကြည့်ရက်အား။
လာပြီး ဒီမှာ လျောက်လွှာတင်ကြ
အလကားနေ၊ လပ်ယားလပ်ယားနဲ့ ငွေရ
ဘုန်းကြီးခေါင်းသာ ရိုက်ခွဲတတ်ဖို့ ဘဲလိုတယ်။
ကြံ့ဖွတ်အင်အားတွေ၊ ဒို့ စုထား။
ကဲ..အော်ချင်ဦးဟဲ့။ ဒို့ အရေး။
လှူချင်သလား။ ဘုန်းကြီး အတွက်ဆွမ်းတော်ရေအေး။
ဖွဲ့ ချင်သလား။ နိုင်ငံရေး အစုအဝေး။
ငါးလွှတ်ဆုတောင်း။ ထောင်ရောက်ကြောင်း။
စာ ကဗျာလက်ကမ်း ။ ဖတ်စမ်းစေတာနဲ့ ၊
ဖုန်း အင်တာနက်၊ နိုင်ငံခြား သွယ်ဆက်ရုံနဲ့ 
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ကဗျာရေးမိရုံနဲ့ 
၀ရမ်းမပါ လာတံခါးခေါက်။ အပေါက်ပိတ်ထားရုံနဲ့ 
ညာဝါးတဲ့ တီဗွီိကြည့်၊ ဝေဖန်မိရုံနဲ့ 
ခိုးရာပါ စိန်တွေကြည့်၊ သွားရည်ကျမိရုံနဲ့ 
ကျုပ်တို့ နံမည် နအဖ။
ငရဲဆိုတာသေပြီးမှ၊ ကျ ချင်လည်းကျ
ခုလတ်တလော၊ ၀မ်းဝဖို့ လိုတယ်။
အသက်ရှိဖို့ က ကိစ္စရှိ။
ဂျပိုး ဆို လိပ် လာဖြစ်။
မီးကုန် ယမ်းကုန်၊ အစွမ်းကုန်သာညစ်။
ဘုန်းကြီးသာဆို၊ အိုအို ပျိုပျို
၀ါနု ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားဆိုရင်ဖြင့်၊
တွေ့ မရှောင် ထောင်ထဲဆွဲ၊
အင်းစိန်ထောင်ဟာ..NLD ရဲ့ ရုံးခွဲ၊
လွှတ်သူ ရှစ်တောင်။ ဖမ်းမယ် တသိန်း။
UN ထောင်လာစစ်ဆေးမှ၊ ဆီပြန်ဟင်းချက်ပြ
မှန်ကြည့် လို့ တောင်ရ။
ထည့်ချက်မဲ့ ဆီပုံးက ခြေပေါက်။
ပိန်တာတွေ ခေတ်စားလို့ ၊
၀ိုင်းကဲ့ရဲ့ ကြတာ၊ ကောင်းသလားဗျာ။
အမလေး၊ ဒီလို အမှန်တွေကို
မတော်တရော် မဆိုပါနဲ ။့
ကျုပ်တို့ မိုးခါး ရေသောက်ရန်။
ကျုပ်မြေးတွေ ကိုယ်ရင် မ၀တ်ရ၊ ဘာအရေးလည်း။
ကျုပ်သေရင် သရဏဂုံမတင်ရ၊ ဘာအရေးလည်း။
ကျုပ်နဲ့ငတေမာဖို့ ဘဲအရေးကြီးတယ်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:01 AM0comments
မွေးမိခင် သို့ကန်တော့ခန်း။
နွဲ့ ဆိုးဆိုးတဲ့ ကျွန်တော့ကို၊
တိုက်ခဲ့တာ..အမေ့ ရင်နို့ ချို။
အမေ နားလည်စွာ၊ အားပေးခဲ့တာ။
ဒုက္ခ ဆင်းရဲထဲကသား၊ နာကျင်မှုဖျောက်စေအား၊
မေတ္တာ နဲ့ မေမေ။
အမေနာမကျန်း၊ သားက ငရဲခန်းထဲနေ။
မပြောကြလည်းလေ၊ အမေ သိနေပေမဲ့.။
မမေးရက် မကြားနိုင်။ ပူပင်ရနှလုံးစိုင်
မေမေ့ မေတ္တာနဲ့ ရေး၊
ငိုကြွေးသံတွေ ကင်းပစေဖို့ ။
ရှေ့ ဆက်တော်လှန်ရန် အသင့်
မေမေ့ ရဲ့ မေတ္တာစစ်တို့ ကြောင့်
မောင်လေးကိုဌေးကြွယ် အတွက်။ မောင်လေးရဲ့ မေမေရဲ့အနစ်ခံမှုအတွက် ဂုဏ်ပြုလျက်ပါ။ ကောင်းရာ သုဂတိလားရာအမှန်ပါ။ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနှင့်။ မမတို့ အားလုံးမောင်လေးနှင့်အတူ ရှိနေကြပါသည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:31 AM0comments
"ယမမင်း ရဲ့ တံခါးခေါက်သံ။ စစ်ဆေးရန် ငရဲသို့ ကြွခဲ့...
သား လွမ်းပေမဲ့လည်း ဖေဖေ (ဦးထင်ကျော်သို့ သားထံမှေ...